Mutambo waJohani Mubhabhatidzi muSan Juan
Caribbean Pota Riko
Mutambo weSan Juan Mutambo waJohani Mubhapatidzi
Kuremekedza Mutsvene Johane mubhapatidzi
Kuti unzwisise kuremekedzwa kwePuerto Ricans kune Saint John mubhabhatidzi ( San Juan Bautista muchiSpain), haufaniri kutarisa kunze kwezita remusoro wechitsuwa chacho: guta reSan Juan. Nekudaro, San Juan Bautista ainzi Christopher Columbus akapa chiwi chePuerto Rico paakazosvika muna 1493 (guta reSan Juan rakanyatsozivikanwa "Porto Rico," kana Rich Port).
Zvechokwadi, mazita acho akaiswa swap uye guta guru raive rakatumidzwa zita rePuerto Rico anodikamwa nemudzimai mutsvene.
Nhasi, Mutsvene Johane mubhapatidzi anoramba ari munhu wepakati pezvisikwa zvechivako uye tsika. Imwe yekereke yekare uye yakatsaurwa zvikuru, yeCatedral de San Juan , ine zita rake. Uye Fiesta de San Juan Bautista , inozivikanwawo sekuti Fiestas de San Juan ndeimwe yezviitiko zvinokosha zvegore negore.
Mutambo waSan Juan Bautista unoitika gore negore musi waJune 24 (Midsummers Day, kana kuti solstice yezhizha) uye inoratidzwa nemitemo shoma uye tsika. Ndiyo inonyanya kukosha emazana e fiestas patronales , kana patron saint festivals, kuti maguta nemataundi muPuerto Rico vanobata gore negore kuti varemekedze vasanangurwa avo vatsvene.
Nguva dzose ndakashamiswa nekukwanisa kwePuerto Rico kuchengeta kadhi rakanyadzisa rakazara yezviitiko, nemunhu pane imwe nzvimbo achipemberera chimwe chinhu anenge mazuva ose (uye zvechokwadi vhiki rese vhiki).
Kubvira kuzvokudya kusvika kune vatsvene kune zviitiko zvezvakaitika kare, chitsuwa ichi chinoda kukanda chikamu mukukudza kwechimwe chinhu chinoumba chikamu chemazuva ano ePuerto Rico. Uye patron saint festivals ine basa rinokosha pano. Guta rimwe nerimwe riri muPuerto Rico rine rimwe, uye vazhinji vanowanzotaurirawo mumwe mutsvene mutsvene.
Iyi kalendari inokuratidza uwandu huzere hweiye anopemberera ndiani uye nguva. Sezvauchaona, Mutsvene Johane mubhapatidzi ndiye mutariri wevamwari emataundi mashomanana, asi hakuna munhu anopemberera nemukurumbira uye anotarisa kuti guta rinounza.
Kunyange zvazvo mutambo wacho, zvechokwadi, wakadzika mumitambo yeKaturike yechitsuwa chacho, kune zvishoma zvinyorwa zvepolkloric izvo zvakaritsaura. Chiitiko chinonyanya kuzivikanwa chaizvoizvo chinoitika usiku huripo pamahombekombe akapoteredza chitsuwa. Sezvakati pakati peusiku unosvika pana 23, iwe uchawana vanhu vanoungana pahombekombe. Pakurohwa pakati peusiku, tsika inotaurira kuti iwe uwire shure mumvura kaviri yenguva. Izvi zvinongoratidzika sechibvumirano chekomborero kwegore rose, uye inoshumirawo sechisimba chisina kukodzera chemutambo.
Sezvakaitwa nevatongi vazhinji vatsvene, mitambo yeSan Juan Bautista inotanga kuchechi uye inoenda mumigwagwa. Dare reSan Juan rinova mutambo wemugwagwa wakazaruka nemapoka evanhu achifamba nenzira yeguta rekare, mapfupa, kurarama bomba y plena mumhanzi, mitambo uye vanhu vari muzvigaro zvemavara zvakasiyana-siyana pavanoratidzwa zvizere. Vejigantes anogara ari chikamu chepa pageantry, kazhinji pane zvinyorwa kuti awedzere chiitiko chiduku chekuona.
Uye kugadziriswa kwaMambo naMambokadzi wechiitiko ichi chinoitika gore negore.
Zvechokwadi, hapana chikwata, chikamu kana kupembererwa muPuerto Rico zvakakwana pasina kudya, uye uchawana zvivako zvezvokudya uye zvinonaka zvinzvimbo zvekumba zviripo. Iyo mhepo yemafaro-yakafanana, ine mitambo miduku yakapoteredza chitsuwa inoitika mumazuva anotungamirira kusvika nekutevera 24. Asi hapana mubvunzo kuti sangano guru rinoitika kuSan Juan. Iyo inofadza, inovaraidza, inokonzera uye yakasiyana-siyana nzira yekupemberera tsika yemunharaunda.
Zvokudya Nekumwa Mhemberero muPuerto Rico
Kufamba Nguva kuPuerto Rico kubva kuMadunhu MaAmerica
Zvokudya kuIsla Verde
Kushanyira El Yunque National Rainforest
Where to Scuba Dive in Puerto Rico
Top 10 Bhandali Restaurants ku Kolkata
Kushanyira Texas State Capitol Complex
Nyika Dzakanyanya Kupfuura Semukadzi
Mutungamiri wePaki dzeColumbus, Ohio
Atlanta's Top 10 Frozen Treats: Ice Cream, Gelato, uye Popsicles
Nhoroondo yeBlizzards neChando cheSvondo muDetroit
Zuva rebasa muSan Francisco
Nechekukosha Kwetsika dzeSouth Africa Township Tours
Kwokugara muHershey, Pennsylvania
Histori Jeanne d'Arc muRuen, France
Kubvumwa Kwemahara Kwemazuva kuZimbabwe National Parks muna 2017
Trier - Endai Guta Rekare Kupfuura muGermany
Kayaking - Anogara Muguta-Rural Kayak Adventure muMichigan